Hodges Connect Archives »Jaamacadda Hodges
tacliinta, Hodges Connect
Jaamacadda Hodges waxay gacan ka geysataa sidii loo buuxin lahaa Fursadaha Shaqaalaha ee ka jira Hodges Connect Jaamacadda Hodges waxay ka jawaabaysaa baaqa ku saabsan horumarinta xirfadda shaqaalaha iyada oo loo marayo hindisahayaga tababarka xirfadeed, Waxbarashada Xirfadeed iyo Tababbarka (PET), oo loo yaqaan Hodges Connect. Hodges Connect wuxuu ku saabsan yahay sidii loo siin lahaa shaqaalaheena tartan tartan waxaana loogu talagalay in lagu diyaariyo shaqaalaha iyada oo la adeegsanayo xirfadaha loo-shaqeeyaha dalbaday ee lagama maarmaanka u ah [...]	Read More
Buuxinta Farqiga Shaqaalaha ee Hindisaha Tababarka Xirfadeed: Jaamacadda Hodges oo Shaacisay Hodges Isku Xidhka Farqiga u dhexeeya xirfadaha shaqaaluhu waa shay ay ururada horumarinta ganacsiga badani ka wada hadlayeen sannado. Shirkaduhu waxay weydiisanayaan xalal. Jaamacadda Hodges waxay kaga jawaabaysaa wicitaankaas iyada oo la socota dadaalkeeda tababar xirfadeed, Barashada Xirfadaha iyo Tababarka (PET), oo loo yaqaan Hodges Connect. "Hodges Connect waa […]